Fanafahana vonjimaika any Dubai: Nafahana Rehefa Nosamborina | Orinasa Mpampanoa lalàna
Bail any Dubai:
Votsotra rehefa voasambotra
Atolotsaina ao Dubai, UAE
Inona ny Bail?
Ny fahazoan-dalàna dia fomba fanao ara-dalàna amin'ny fanomezana olona iray voampanga amin'ny raharaha heloka bevava famotsorana vonjimaika amin'ny alàlan'ny fametrahana vola antoka, fatorana na pasipaoro antoka mandra-pahatongan'ny famotopotorana na rehefa mandray fanapahan-kevitra momba ity raharaha ity ny fitsarana. Ny fomba fahazoan-dàlana UAE dia tsy hafa noho izay mety ho tonga any amin'ny firenen-kafa eran'izao tontolo izao.
Mora ny fonja rehefa mivoaka ara-dalàna
lalàna ao an-toerana an'ny UAE
Torolàlana momba ny famotsorana am-ponja am-ponja rehefa voasambotra any amEarrat
Raha vao nigadra ny olona iray voalohany dia ny fidinany voalohany dia ny hivoaka haingana araka izay azo atao. Ny fomba mahazatra amin'ny fanatanterahana izany dia ny famoahana onitra. Rehefa vita izany dia avela handeha ilay olona voasambotra, saingy miaraka amin'ny fepetra hiseho eo amin'ny fitsarana rehefa nasaina. Ato amin'ity lahatsoratra ity, ho hitanao ny fomba ara-dalàna takiana amin'ny famoahana ny onja ao amin'ny UAE.
Fandoavan-dalàna raha voasambotra araka ny Lalànan'ny UAE
Ny andininy faha-111 ao amin'ny Lalàna momba ny Heloka Bevava Emirà Arabo Mitambatra dia mifehy ny fomba ara-dalàna amin'ny fanomezana fahafahana vonjimaika. Araka izany, ny safidy fahafahana vonjimaika dia mihatra indrindra amin'ny raharaha heloka bevava madinika, heloka bevava, anisan'izany ny tseky sy ny raharaha hafa. Fa momba ny heloka bevava lehibe kokoa toy ny vono olona, ​​ny halatra na ny halatra, izay miaraka amin'ny fanamelohana ho faty na fanamelohana ho faty, dia tsy azo ampiharina ny fahafahana vonjimaika. Antsoy izahay izao raha mila fanendrena maika sy fivoriana amin'ny +971506531334 +971558018669
Raha vao voasambotry ny polisy any UAE ny olona voampanga ary alohan'ny famindrana ny raharaha dia any amin'ny fitsarana, ny olona na ny mpisolovavany, na ny havany dia afaka mametraka fangatahana famoahana azy amin'ny famonjana amin'ny mpampanoa lalàna. Ny Fampanoavana dia ampangaina amin'ny fanatanterahana ny fanapahana karama mandritra ny fanadihadiana.
Ny pasipaoro iray an'ny Guarantor dia azo arahana
Ny fahazoan-dalàna dia manome alàlana ny fisehoan'ny voampanga mba hanao fitsarana ara-pitsarana bebe kokoa ary hiantohany fa tsy miezaka ny handositra ny firenena izy ireo. Ary mba hiantohana izany dia tazonina ilay pasipaoron'ny olona voampanga, na an'ny fianakaviany, na mpiantoka. Ny faktiora ara-bola dia azo apetraka eo ambanin'ny Andininy faha-122 ao amin'ny Lalànan'ny heloka bevava .. Azo atao izany na tsy misy pasipaoro fa miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny mpampanoa lalàna na mpitsara. Saingy, anjarany ny Fitsarana UAE na manome na hanambany. Matetika ny fitsarana no manome toky fa mila fampahalalana marina sy feno isika mba hanoroana anao amin'ny fomba mety.
Ny mpiantoka dia ny iray izay manome antoka (tompon'andraikitra tanteraka) ny fihetsiky ny voampanga rehefa namoaka azy tao amin'ny fonja. Tokony ho mailo sy hitandrina ny guarantor amin'ny fitandremana ny pasipaorony. Ny fatoran'ny fahazoan-dalàna dia fifanarahana ekipa napetraky ny mpiantoka izay tompon'andraikitra azy amin'ny hetsika ataon'ilay voampanga, amin'ny tsy fanatrehany ny fizotran'ny fitsarana.
Manana mpisolovava manam-pahaizana manokana amin'ny fahazoana faktiora
Miankina amin'ny alàlan'ny toetra sy ny hasarotan'ity raharaha ity, afaka manao fangatahana onitra i bail any Dubai, arahin'ny fitsarana ny fangatahana onitra. Mpahay mpisolovava manokana izahay amin'ny fahazoana faktiora amin'ny mpanjifantsika voampanga araka ny lalàna mifehy ny heloka bevava ary miala amin'ny fonja.
Azo omena ny: Bail
Polisy, talohan'ny famindrana io raharaha io amin'ny Fampanoavana;
Fampanoavana, alohan'ny famindrana ny raharaha any amin'ny fitsarana;
Fitsarana, alohan'ny famoahana didim-pitsarana.
Fepetra takian'ny pasipaoro mba ahafahana miatrika ny fandefasana ho antoka ho antoka:
Ny pasipaoro dia tsy maintsy manan-kery.
Tsy maintsy manan-kery ny Visa.
Midika izany fa ny olona iray izay nandika ny fahazoan-dàlana dia tsy afaka mametraka ny Passport ho antoka manome toky. Raha vao voavotsotra ilay olona voampanga, dia omena azy ny hoe "Qafala," izay antontan-taratasy fahazoan-dàlana manarona ny fepetra voaloa.
Rehefa esorina na mikatona ilay raharaha, dia eo am-panaovana famotorana na rehefa avy nafindra tany amin'ny fitsarana izy io, ny antoka ara-bola voarakitra ho famoahana dia haverina amin'ny fomba feno ary ny mpiantoka dia navoaka amin'ny asa voasonia.
Azo navaizina ny fonja
Ny andininy faha-115 ao amin'ny lalàna mifehy ny heloka bevava dia manome fanafoanana onitra na dia efa nekena na novonoina aza, mifototra amin'ireto antony manaraka ireto:
Raha voafitaky ny voampanga ny fepetra voapanga, ohatra, tsy manatrika famotorana na fivoriana alohan'ny fotoana anaovana ny fanenjehana.
Raha toa ka misy toe-javatra vaovao manoloana ny raharaha dia ilaina ny mandray fepetra, ohatra, raha toa ka mendrika ny heloka bevava ny olona voampanga, dia tsy manan-kery.
Mora ny fampidirana am-ponja vonjimaika raha toa ka mangataka fanampiana avy amin'ny mpisolovava mpiaro za-draharaha sady mahay za-draharaha ianao izay zatra amin'ny lalàna ao amin'ny UAE. Ity karazana mpisolovava ity dia afaka manome torohevitra foana momba ny lalàna manan-danja sy ny fisoloan-tena ara-dalàna mba hahazoana antoka amin'ny famoahana azy
Antsoy izahay izao mba hisian'ny fotoana maika amin'ny 971506531334 + 971558018669 +
Misy ny vahaolana amin'ny olana ara-dalàna rehetra